Aiza ny Devoly no Mipetraka? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kikamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Masedonianina Myama Norvezianina Nzema Ossète Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tiorka Tseky Tsonga Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Aiza ny Devoly no Mipetraka?
Anjely ny Devoly ka mipetraka any amin’ny faritra tsy hita maso. Tsy any amin’ny afobe anefa io toerana misy azy io, ka hoe mampijaly ny ratsy fanahy izy, araka ny hita eo amin’ny sary.
‘Ady tany an-danitra’
Afaka nivezivezy araka izay tiany tany an-danitra i Satana Devoly taloha, sady afaka nankeo anatrehan’Andriamanitra sy ny anjely tsy nivadika. (Joba 1:6) Nilaza mialoha anefa ny Baiboly fa hisy ady any an-danitra, ka horoahina i Satana ary hazera etỳ an-tany. (Apokalypsy 12:7-9) Efa nitranga io ady io, raha jerena ny zava-mitranga eran-tany sy ny famaritan’ny Baiboly ireo daty manan-tantara. Tsy afa-miala etỳ amin’ny manodidina ny tany intsony izao ny Devoly.
Midika ve izany fa monina ao amin’ny toerana iray eto an-tany izy? Ahoana, ohatra, ilay lazain’ny Apokalypsy 2:13 hoe tao amin’ny tanànan’i Pergamosy no ‘nisy ny seza fiandrianan’i Satana’, ary tao no ‘nonenan’i Satana’? Te hilaza ny Baiboly eo fa nanjaka tao ny fivavahana tamin’i Satana. Milaza ny Baiboly fa ny Devoly no mitondra “ny fanjakana rehetra manerana ny tany onenana.” (Lioka 4:5, 6) Midika izany fa tsy mipetraka ao amin’ny toerana iray eto an-tany izy, fa etỳ amin’ny manodidina ny tany.
Tena Misy ve ny Devoly?
Tena Misy ve ny Demonia?
Namorona ny Devoly ve Andriamanitra?
Afaka Mifehy ny Olombelona ve ny Devoly?
Inona ny Anjely?